Nna mu nkitahodi a ɛmfata (1-30)
Ɛnsɛ sɛ musuasua Kaananfo (3)
Abusuafo a wɔbɛn paa (6-18)
Ɔbea a wayɛ bra (19)
Mmarima a wɔne mmarima da (22)
Onipa a ɔne aboa da (23)
‘Mommma mo ho nngu fĩ, anyɛ saa a, asaase no bɛfe mo agu’ (24-30)
18 Yehowa toaa so ka kyerɛɛ Mose sɛ: 2 “Ka kyerɛ Israelfo sɛ, ‘Mene Yehowa mo Nyankopɔn.+ 3 Ɛnsɛ sɛ musuasua Egyptfo a na mote wɔn asaase so no, na Kaananfo a mede mo rekɔ wɔn asaase so no nso, ɛnsɛ sɛ musuasua wɔn+ anaa mudi wɔn amanne akyi. 4 M’atemmusɛm so na munni, na m’ahyɛde mu na monnantew.+ Mene Yehowa mo Nyankopɔn. 5 Munni m’ahyɛde ne m’atemmusɛm so. Obiara a ɔbɛyɛ saa no nam so benya nkwa.+ Mene Yehowa. 6 “‘Ɛnsɛ sɛ mo mu biara ne ne busuani a ɔbɛn no paa nya nna mu nkitahodi.*+ Mene Yehowa. 7 Ɛnsɛ sɛ wo ne wo papa nya nna mu nkitahodi, na ɛnsɛ sɛ wo ne wo maame nso nya nna mu nkitahodi. Ɔyɛ wo maame, enti ɛnsɛ sɛ wo ne no da. 8 “‘Ɛnsɛ sɛ wo ne wo papa yere da.+ Woyɛ saa a, woagu wo papa anim ase.* 9 “‘Wowɔ nuabea a ɔyɛ wo papa babea anaa wo maame babea a, sɛ wɔwoo mo wɔ ofi baako mu oo, sɛ ɛsono baabi a wɔwoo obiara oo, ɛnsɛ sɛ wo ne no da.+ 10 “‘Ɛnsɛ sɛ wo ne wo babarima babea anaa wo babea babea da, efisɛ ɛyɛ w’ankasa adagyaw. 11 “‘Wo papa babea a ɔne ɔbea foforo awo no no, ɛnsɛ sɛ wo ne no da. Ɔyɛ wo papa ba, enti ɔyɛ wo nuabea. 12 “‘Ɛnsɛ sɛ wo ne wo papa nuabea da. Ɔne wo papa yɛ mogya koro.+ 13 “‘Ɛnsɛ sɛ wo ne wo maame nuabea da, efisɛ ɔne wo maame yɛ mogya koro. 14 “‘Ɛnsɛ sɛ wo ne wo papa nuabarima yere da. Ɛbɛyɛ animguase ama wo papa nuabarima no,* efisɛ ne yere yɛ wo maame.+ 15 “‘Ɛnsɛ sɛ wo ne wo ba yere da.+ Ɔyɛ w’ase, enti ɛnsɛ sɛ wo ne no da. 16 “‘Ɛnsɛ sɛ wo ne wo nua yere da,+ efisɛ ɛbɛyɛ animguase ama wo nua no.* 17 “‘Ɛnsɛ sɛ wo ne ɔbea ne ne babea nyinaa da,+ na ɛnsɛ sɛ wo ne ne babarima babea anaa ne babea babea da. Wɔyɛ n’abusuafo a wɔbɛn no. Woyɛ saa a, ɛyɛ ahohwibra.* 18 “‘Nware ɔbea nka ne nuabea ho mma wɔmmɛyɛ akorafo,+ na ɛnsɛ sɛ wo ne no da bere a ne nua no da so te ase. 19 “‘Nkɔ ɔbea a wayɛ bra ho ne no nkɔda. Ne ho ntew.+ 20 “‘Ɛnsɛ sɛ wo ne wo yɔnko yere da de gu wo ho fĩ.+ 21 “‘Ɛnsɛ sɛ woma wɔde wo ba biara bɔ afɔre ma Molek.+ Nyɛ saa mfa ngu wo Nyankopɔn din ho fĩ.+ Mene Yehowa. 22 “‘Wo ne ɔbarima nnna sɛnea wo ne ɔbea da.+ Ɛyɛ akyiwade. 23 “‘Ɛnsɛ sɛ ɔbarima ne aboa da de gu n’ankasa ho fĩ, na ɛnsɛ sɛ ɔbea de ne ho ma aboa ma ɔne no da.+ Ɛyɛ akyiwade. 24 “‘Mfa eyinom biara ngu wo ho fĩ, efisɛ eyi na ama aman a merepam wɔn afi w’anim yi ho agu fĩ.+ 25 Ɛno nti asaase no ho agu fĩ, na mede ne bɔne ho akatua bɛba no so, na ɛbɛfe so nnipa agu.+ 26 Na mo de, munni m’ahyɛde ne m’atemmusɛm so,+ na ɛnsɛ sɛ moyɛ akyiwade yi bi. Kuromanni oo, ɔhɔho a wabɛsoɛ mo mu oo, ɛnsɛ sɛ obiara yɛ bi.+ 27 Akyiwade yi nyinaa na wɔn a wɔtenaa asaase no so ansa na moreba no yɛe.+ Ɛno nti na seesei asaase no ho ntew no. 28 Ɛba saa a, asaase no remfe mo ngu te sɛ aman a wɔtenaa so ansa na moreba no, efisɛ moangu ho fĩ. 29 Obiara a ɔbɛyɛ akyiwade yi bi no, wobekum no.* 30 Monhwɛ nni m’ahyɛde so na moanyɛ amanne tantan a wɔn a wɔtenaa asaase no so ansa na moreba no yɛe no bi,+ na angu mo ho fĩ. Mene Yehowa mo Nyankopɔn.’”
^ Nt., “koyi ne busuani adagyaw so.”
^ Nt., “Ɛyɛ wo papa adagyaw.”
^ Nt., “Nyi wo papa nuabarima no adagyaw so.”
^ Nt., “efisɛ ɛyɛ wo nua adagyaw.”
^ Anaa “wobetwa saa ɔkra no afi ne man mu.”